Ngaba i-Cannabis ingakunceda ufunde ngcono? 2022
Oktobha 21, 2021 U-Okpara Francis
Ngaba i-Cannabis ingakunceda ufunde ngcono?
Kuluntu apho abantwana balandelwa ukuba bafunde ukuya kwikholeji ukuze babe nekamva elingcono, kunokuba nzima ukukhuthazeka ngelixa ufunda. Ngazo zonke izifundo, umsebenzi wesikolo, kunye nezinye izinto ezinxulumene nokufunda, ukugcina kunzima ngakumbi kunangaphambili.
Ngelixa zininzi izinto onokuzenza ukufumana inkuthazo, abanye abafundi bazama i-cannabis. Uninzi lwabafundi luzamile umlingo wentsangu, iyabanceda ukuba bagxile, baphumze iingqondo kwaye benze izinto.
Ngophuhliso oluqhubekayo kwishishini le-cannabis, iimveliso ezingaphezulu ezinomtsalane kubafundi ziyathengiswa. Enye yeemveliso ezaziwa kakhulu yi-Delta 8 gummies ezifumaneka apha.
I-cannabis yamkeleka ngakumbi kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela, kungoko kutheni ungazami i-cannabis ukukunceda ufunde?
Ungayinceda njani i-Cannabis ukuba ugxile kuyo
Ukuba unzima ukugxila kwimisebenzi yakho, ukuphucula imeko yakho inokuba sisiqalo esihle. I-Cannabis yaziwa ngokuba yonyusa imo yakho kwaye ikuncede ufezekise imisebenzi yakho ngokukhawuleza kunesiqhelo.
Nangona i-cannabis inokukunceda ugxile, i-cannabis ayisiyonto ikhuthazayo kwaye ayibangeli jitteriness. Sisisombululo esifanelekileyo xa uzama ukufumana inkuthazo yokufunda ngelixa uzolisa ingqondo yakho ngaxeshanye.
Ngaphandle kokuba kukukhuthaza imood, i-cannabis ikwanepropathi yokunciphisa uxinzelelo ngokunciphisa amanqanaba e-cortisol. Ukuba ukwimo entle kwaye ungaziva uxinezelekile, kuya kuba lula ukwenza izinto.
Abanye banokuthi ukuxulutywa ngamatye kunokukwenza uzive wonqena kwaye ungabinamveliso kodwa i-cannabis ikunceda ugxile ekuphuculeni ubuchule bakho.
I-Cannabis ichaphazela njani uBongo
Ngokophando, i-cannabis yayinakho ukukhulisa Uxinzelelo lwe-dopamine kwingqondo yakho. Abasebenzisi be-cannabis bexesha elide banokuba noxinaniso oluphantsi lwe-dopamine kwingqondo yabo xa kuthelekiswa nabangengabo abasebenzisi be-cannabis, kodwa i-cannabis yaziwa njengechaphazela ingqondo ngeendlela ezilungileyo xa isetyenziswe ngokufanelekileyo.
Inani lezifundo zibonisa ukuba i-cannabis iyanceda ekubuyiseleni ukunxibelelana kwengqondo kwaye idlala indima kwi-neurogeneis. Olu phononongo lubonise ukuba i-cannabis iyakwazi ukunceda ekunyangeni uxinzelelo, ukuphazamiseka kwengqondo kunye nezinye iingxaki zempilo yengqondo.
Indlela yokuphila yeCannabis
Indlela yokuphila ye-cannabis esihlala siyibona kubantu abathanda uSnoop Doog inokuba sisikhuthazo sokufumana ikholeji. I-Cannabis inokudityaniswa ngeendlela ezininzi ebomini bethu, kwaye inokuhambisa iziphumo eziluncedo ukuba isetyenziswe ngendlela eyiyo.
Ngaba usela ikofu okanye iti rhoqo kusasa? Ngaba uyazilolonga ukuphuma kwesikolo? Ngaba uyatshaya ukuze ususe uxinzelelo? I-Cannabis inokusetyenziswa phantse kuyo yonke into esiyenzayo.
Iindidi ezahlukeneyo zoSetyenziso
I-Cannabis ifumaneka kwiintlobo ngeentlobo zeemveliso, ukusuka kwioyile, kwiigummies ukuya kwiipeni zokuphefumla, kunye nezinye ezininzi. I-Edibles yenye yeendlela eziqhelekileyo zokusebenzisa i-cannabis.
Ukuba uyatshaya, kukho iisigarethi, ii-pre-rolls, kunye neepeni zokuphefumla ezikhoyo. Ezi zinto zinokukunceda uyeke ukutshaya ukuba uyafuna. Ngokungafaniyo necuba lecuba, iimveliso ze-cannabis azinazo iziphumo ebezingalindelekanga.
Ukufunda kunokuba yindinisa kwaye kuyadika ukuba kukho iindlela zokwenza ukufunda kube mnandi ngakumbi. Ukuba uswele inkuthazo kwaye unzima ukugxila kwimisebenzi kunye nokujongana noxinzelelo, i-cannabis inokuba ngumhlobo wakho.
I-Cannabis inakho kukunceda ufunde ngcono kwaye ukhula iziphazamiso. Ikonyusa ukugxila kwakho okwenza i-cannabis isisombululo esifanelekileyo kwabo bafuna ukwenza izinto ngelixa ufunda.
Post Previous:Ezona zikolo zi-15 ziPhambili zeZikolo zasePrayimari eLondon
Okulandelayo Post:Uyihlisa njani intlawulo yemali mboleko yakho yomfundi